Inona avy ireo karazana sensor sensor amin'ny rantsan-tànana ao amin'ny Android sy ny fomba fiasan'izy ireo | Androidsis
Inona avy ireo karazana sensor sensor misy ny rantsantanana ao amin'ny Android
Ny sensor sensor dia nanjary iray amin'ireo fahita indrindra amin'ny tontolon'ny Android. Isaky ny mahita telefaona bebe kokoa manana an'ity endri-javatra ity isika. Ka io teny io dia mila fantarintsika tsara, satria toa tsy mandeha mankaiza intsony izany atsy ho atsy. Noho izany, lazainay aminao bebe kokoa ny momba azy ireo sy ny karazana misy ankehitriny.
Hatramin'ny maha-zavatra vao tsy ela akory izay, isika dia efa miaraka amina karazana sensor amin'ny dian-tànana maro samihafa amin'ny telefaona finday Android ankehitriny. Ka tsara ny mahafantatra bebe kokoa momba ireo karazana isan-karazany any.
1 Ahoana ny fiasan'ny sensor sensor
2 Miasa sensor sensor
3 Karazan-tsarimihetsika fingerprint
Ahoana ny fiasan'ny sensor sensor
Ny fiasan'ny sensor an'ny dian-tànana dia mitovy foanana inona na inona karazany na toerana misy amin'ny telefaona. Ny zavatra ataony dia ny mamantatra ireo lalan-tsoratry ny rantsantanan'ny mpampiasa. Taloha dia ankihiben foana izy io, na dia azo atao aza ankehitriny ny mampiasa rantsantanana hafa, mazàna ny rantsantanana. Araka ny efa nolazainay, izy io dia mamantatra ny rantsan-tànana ary manao ny fakana ny dian-tanan'io voalaza io, izay mifanohitra amin'ireo efa voasoratra ara-dalàna.
Amin'izany fomba izany, ny dian-tànana voatahiry amin'ny telefaona dia ampitahaina amin'ireo natao tamin'izany fotoana izany. Amin'ity fizotran'ny fisoratana anarana ny dian-tànana vaovao ity, ny telefaona Android dia hamonjy ireo tsipika napetrantsika eo ambonin'ity sensor ity. Ireo tsipika rehetra ireo dia mitambatra ary misy sarintany misy ny dian-tanan'ny mpampiasa.
Ny findaintsika Android dia mitahiry sarintany misy ny dian-tongotra. Amin'izany fomba izany, isaky ny ampiasaina ity sensor sidina ity, ny iray vaovao dia ampitahaina amin'ilay iray ao amin'ny firaketana. Raha mifanaraka dia afaka mahazo telefaona na telefaona irina isika, fa raha tsy mifanaraka dia holavina ny fidirana.
Miasa sensor sensor
Ireo fiasa izay omen'ny sensor sensor ho antsika dia nitombo rehefa nandeha ny fotoana. Ny tena lehibe dia sokafy soa aman-tsara ny telefaona. Koa satria amin'ity fomba ity, tsy misy olona, ​​afa-tsy ny tompony, no afaka miditra amin'ny telefaona. Tsara mba hisorohana ny masom-bidy na sanatria misy mangalatra ny telefaoninao.
Rehefa mandeha ny fotoana dia misy fampidirana vaovao ho an'ny sensor momba ny dian-tànana ao amin'ny Android. Nampiasaina ho mandoa vola amin'ny finday, na dia vitsy aza ny marika manome an'ity safidy ity amin'izao fotoana izao (azo atao amin'ny Samsung Pay). Na dia antenaina hampiditra tsikelikely amin'ny marika maro hafa aza izy.
Azo atao koa ny mampiasa azy io mamaly antso na mifehy ny fampiharana aza. Izy ireo dia fiasa izay tsy fantatry ny mpampiasa matetika ary zara raha ampiasaina, saingy mety hahaliana azy ireo ny hivoaka bebe kokoa amin'ny sensor an'ny dian-tanan'ny findainao.
Na dia, azonao atao aza, azonao atao ny mamono ny fakan-tsarin'ny tanan-tanan'ny findainao. Ao amin'ity lahatsoratra ity mampiseho ny fomba hahatratrarana azy.
Mahita karazana fantsom-panafody marobe isika anio, na dia misy aza ireo izay hitantsika matetika indrindra amin'ny telefaona Android. Azo antoka fa mahazatra anao izy ireo, holazainay aminao bebe kokoa momba ny tsirairay amin'ireo karazana ireo, mba hahazoanao hevitra mazava.
Mpamaky rantsantanana ultrasonika: Ity karazana sensor ity dia misy ampahany roa (mpampita sy mikrô). Ny transmitter dia tompon'andraikitra amin'ny famoahana ultrasound, izay mifanipaka amin'ny tampon'ny rantsantanan'ny mpampiasa ary azo amin'ny microphone izy. Amin'izany fomba izany dia voasoratra ny dian-tànana tsy ara-dalàna.
Fandraisana sensor capacitive: Ny fiasan'ity karazana mpamaky ity dia mitovy amin'ny an'ny efijery mikasika ny telefaona. Satria tsikaritr'izy ireo ny fiasan'ny herinaratra amin'ny rantsantanan'ny mpampiasa, isaorana izay namoronana sarintany misy ny dian-tanan'ny tanan'ny mpamaky.
Ireo roa ireo no hitantsika amin'ny telefaona Android ankehitriny. Miova tsikelikely ny toerana misy ny sensor. Tamin'ny bokotra fanombohana na teo aoriany (izay mbola matetika indrindra) no nisy azy ireo. Hitantsika tsikelikely ny fomba fampiasana ny toerana hafa toy ny sisiny ary izy ireo koa dia tafiditra ao anaty efijery.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Inona avy ireo karazana sensor sensor misy ny rantsantanana ao amin'ny Android